Ahiana ho fanakorontanana sy fampihorohoroana: nisy grenady teo amin’ny vavahadin’ny kianjan’i Mahamasina | NewsMada
Par Taratra sur 17/12/2018
Karazana fampihorohorona sa fanakorontanana? Grenady iray hita teo anoloan’ny vavahadin’i Mahamasina, omaly vao maraina be. Tsy nipoaka izy io, saingy mety nokasaina hapoaka ihany. Tonga teny an-toerana avy hatrany ny mpitandro filaminana.
Hita teo amin’ny ilany andrefan’ny vavahady, omaly tokony ho tamin’ny 6 ora sy sasany maraina io grenady io. Nampandre ny mpitandro filaminana avy hatrany ny tompon’andraikitry ny kianja, nahita izany. Tonga teny an-toerana ny polisy sy ny zandary nanao ny fizahana. Teny an-toerana ihany koa ny miaramila manampahaizana manokana momba ny fitaovam-pidiana, ka nanamarina fa tena grenady “offensive” tokoa io.
Tsy nisy nahita izay olona nametraka izany na mety nanipy ihany koa. Tsy nipoaka rahateo ilay grenady. Tsy fantatra izany ity fitaovam-piadiana ity raha efa ny alina no teo na io maraina io. Nisy hetsika nataon’ny kandidà iray tao Mahamasina, ny asabotsy ary mbola nisy lalao baolina lavalava ihany koa omaly teo amin’ny kianjabe. Nentin’ny miaramila hanaovana fanadihadiana ilay fitaovam-piadiana. Manokatra ny famotorana kosa ny polisy eny amin’ny boriborintany fahadimy.
Mafana ny toe-draharaha
Ao anatin’ny fotoana mampafampana ny raharaham-pirenena sy ny hiatrehana ny fifidianana izany rehetra izany. Ahitana ity resaka grenady ity hatrany eto amintsika rehefa miakatra ny hafanana politika. Efa miseho matetika ihany fa tsy voalohany izany. Fitorahana tobin-tsolika, fanapoahana grenady teny amin’ny kianjan’i Mahamasina ka nahafatesana olona sy nandratrana olona maro tamin’ny fitondrana Rajaonarimampianina. Tsy nisy vokany firy anefa ny fanadihadiana manodidina ireny grenady ireny, ka tsy mahagaga raha miverimberina izy ity. Ahina aza ny mety mbola hiverenany.